Ucwaningo luveza umkhuba omusha ogilwa uma kwenziwa ucansi | isiZulu
Ucwaningo luveza umkhuba omusha ogilwa uma kwenziwa ucansi
Johannesburg – Sekunocwaningo olusha oluphenya ngesitayela esesingenisile esibizwa ngokuthi yi”stealthing” lapho amadoda ekhipha ikhondomu maphakathi nenkonzo yasekamelweni ngaphandle kokuvumelana nophathina.
Ophenyweni olwenziwe ngummeli u-Alexandra Brodsky weNational Women's Law Center, kuvela isitayela esihlasimulisa umzimba lapho amadoda asenomkhuba wokukhipha ikhondomu maphakathi nocansi ngaphandle kokuvumelana nalowo abasuke bezithokozisa naye.
Uma i-“stealthing” yenzeka, lokho kuchaza ukuthi isimo sokuzibandakanya ocansini nivumelene singaphenduka ngokuphazima kweso sibe yisigameko ukunukubeza ngokocansi – ngokweso lomthetho.
Lolu cwaningo luthole izinkundla eziningi ku-internent lapho abazibandakanya kulo mkhuba becijana ngamathiphu enziwayo uma begila lo mkhuba.
OLUNYE UDABA: Ukwenza ucansi kunomthelela eholweni lakho - Ucwaningo
Ngokocwaningo lukaBrodsky uthe ngenxa yokuthi kuningi okusuke kumfiliba ngalo mkhuba, labo abasuke behlukumezekile baba nokungabaza ngokuthatha izinyathelo zomthetho.
“Abantu abaningi engikhulume nabo bazwakalise ukuthi bebeba nokudideka uma into enjengale yenzeka ngoba bebengazi nokuthi ibizwa ngani,” kucashunwa uBrodsky.
Amanye amadoda athe isizathu sokumonyula ikhondomu kusaqhubeka ucansi ukuthi bathanda indlela ucansi oluzwakala ngayo ngaphandle kwejazi, kanti abanye bathi bakwenza lokhu ukutshengisa ukuthi ubani onamandla.